အိုးထရက်ဖို့ဒ် ကျိန်စာဆိုးကနေ မလွတ်မြောက်နိုင်သေးတဲ့ အာဆင်နယ်	julyseven	ဆောင်းပါး	မန်ယူ 1 –0အာဆင်နယ် ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်
မန်ယူ - အာဆင်နယ် ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်	julyseven	ဆောင်းပါး	ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (၁၁)မှာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တဲ့ ချန်ပီယံကာကွယ်မယ့် မန်ယူနဲ့ လက်ရှိ အဆင့် (၁) မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းတို့ဟာ မန်ယူအသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်း အိုးထရက်စ်ဖို့ မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ ည (၁၀း၃၀) မိနစ်အချိန်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
UCL : Borussia Dortmund0: 1 Arsenal Highlight Download	Ranger	မှတ်တမ်းများ	Goal Highlighthttp://www.mediafire.com/?5r6229ejb4671am (11 MB)----------------Full Match - 704x400, TS, 600Mb (English)https://mega.co.nz/#!2xY3AABb!L8FzoiHRoZ3tjKu8P9aQr0eTdhcwUJJ5ohTOxneXTxIhttp://www.mediafire.com/?5r6229ejb4671am----------------credit to http://livefootballvideo.com----------------
EPL : Arsenal2:0Liverpool Highlight	Ranger	မှတ်တမ်းများ	MOTD Highlight Dowload http://depositfiles.com/files/j0a7m3ifb (177 MB)credit to original uploaderMediafire LinksComing soon
EPL : Crystal Palace0:2Arsenal Highlight	Ranger	မှတ်တမ်းများ	Mikel Arteta sent off!
65mins: Arteta takes out Marouane Chamakh about 40 yards from goal. Arteta was the last man but was thatareal goalscoring chance? Looked like it had yellow card written all over it, but Chris Foy thought otherwise.
Read more: http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2470211/Crystal-Palace-v-Arsenal--live-Premier-League.html#ixzz2ipyqLjvQ Highlight Download http://www.mediafire.com/?m1m67yorpnog6xp 14 MB Read more... Add new comment
UCL : Arseanl 1 :2Borussia Dortmund Highlight	Ranger	Full Match https://hotfile.com/dl/251758074/12176a1/1.ucl.102213.ars.v.bvb.sd.60fps.rar.html (675.5 MB)https://hotfile.com/dl/251762100/ef9b193/2.ucl.102213.ars.v.bvb.sd.60fps.rar.html (629.5 MB)credit to fbtz.com
အာဆင်နယ်ကို အားပေးတဲ့ Gunner တစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ လွယ်တယ်လို့ သင်ထင်နေပါသလား	Minnwaiyan	........................Depression.......................................................Delight.................................... 2010 ခုနှစ် သြဂုတ်လက Nickspinkboots ရဲ့  http://bigfourza.com မှာ ရေးသားထားတဲ့ It’s Not Easy Being A Gooner ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို Arsenal Myanmar မှာ MinWaiyan ဘာသာပြန် ရေးသားခဲ့တာလေး ပြန်ပြီး အရှေ့့ကို ထုတ်လာပေးတာပါ။ ယခုရာသီ ကျနော်တို့ ချစ်တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်စွာ ရလဒ်ပိုင်းတွေ ကောင်းနေပါတယ်။........................အာဆင်နယ်ဖန်တွေအနေနဲ့ ၂၀၀၅ FA ဖလားရပြီးကတည်းက ဖလားလက်မဲ့ ဂ နှစ်လောက် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေမှာ အာဆင်နယ်အသင်းကို ဘယ်လို စိတ်ထား ဘယ်လို သဘောထားတွေနဲ့ အားပေးခဲ့လဲဆိုတာ ဒိဆောင်းပါးလေးက တနည်းတဖုံ ထင်ဟပ်စေပါတယ်။ ကျနော်တို့ အသင်းမှာ အောင်မြင်ခဲ့ချိန်တွေ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ အသင်းမှာ ကျရှုံးခဲ့ချိန်တွေ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ အသင်းက ကျရှုံးရာကနေ အောင်မြင်ဖို့ အချိန်တခုယူပြီး ပြန်လည်နိုးထဖို့ လုပ်နေတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော အာဆင်နယ်ဖန် စစ်စစ် တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ........................ဒါ့ကြောင့်လည်း အာဆင်နယ်ဖန်တွေဟာ တခြားဖန်တွေထက် ပိုစည်းလုံးကြတယ် ချစ်ခင်ကြတယ် ၊ အသင်းကို အားပေးတာ တပြားသားမှ မလျော့ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံး တခုထပ်မေးလိုက်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ကို အားပေးတဲ့ Gunner တစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ လွယ်တယ်လို့ သင်ထင်နေပါသလား P.S - ကျနော်တို့ AM မှာ ဆောင်းပါးကောင်းလေးတွေ ရေးထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အားလုံး စိတ်ဝင်စားရင် မဖတ်ရသေးသူတွေ အထွေထွေ ဆောင်းပါးအောက်မှာရှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ Ranger (Arsenal Myanmar)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...............ဒီနှစ်ရာသီကြိုကာလလည်း ပြီးသွားပြန်ပါပြီ.. အခု နည်းနည်းလေး စ လိုက်တာနဲ့ အာဆင်နယ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ စိုးရိမ်မှုတွေ အကုန်ကို စပြီး ဖန်တီးပေးတော့တာပါပဲ..လူတွေက အာဆင်နယ် ပရိသတ်တွေ ( The Gunners တွေ )ကို ဘယ်လို သတ်မှတ်ထားကြလည်း ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်.. နည်းနည်းဖြစ်ရင် များများပိုပြီး အဖြစ်သည်းတဲ့လူတွေ.. မကျေနပ်ပေမယ့် တိတ်တိတ်လေးပဲ ပေါက်ကွဲနေကြရတဲ့ လူတွေ.. အဆိုးဆုံးကတော့အာဆင်နယ်ကို အားပေးတာဟာ စိတ်ကူးအယဉ် လွန်နေတဲ့ ကျပ်မပြည့်တဲ့ လူတွေမို့လို့ ဆိုပြီး ပြောနေကြတာတွေပေါ့တကယ်တော့ အာဆင်နယ်ကို အားပေးတဲ့အလုပ်ဟာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ သူတို့ မသိကြပါဘူး.. ခက်ခဲလွန်းလို့ ကျွန်တော်တို့လိုဂန်းနားတွေဟာ ဂုဏ်ပြုခံဖို့တောင် သင့်နေပါတယ်.. ဘာလို့များလဲလို့မေးလာခဲ့ရင်.............................ဒါတွေကြောင့်ပါပဲ-----........................နံပါတ် ၁-- တကယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အသင်းလောက် အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ အမြဲကြုံနေရတဲ့ အသင်းဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ..အဲ.. အပြောင်းအလဲဆိုလို့ ဟားလ်စီးတီးတွေ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ခဏလေး တက်လာနိုင်တာတို့လိဒ် အသင်းဗြုန်းကနဲ ဟိုးအောက်တန်း ရောက်ခဲ့ တာမျိုးကို ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး........ အသင်းကို ကြည့်ချင်လို့ အမ်းမရိတ်မှာ တစ်ရာသီလုံးစာလက်မှတ်ဝယ်သူတွေဟာ ဘာနဲ့တူလည်းဆိုတော့ သူတို့ကို ငရဲပြည်မှာ ရိုလာကိုစတာစီးဖို့ လက်မှတ်စောင့်နေကြ သလိုပါ..........................
EPL : Arsenal4: 1 Norwich Highlight	Ranger	မှတ်တမ်းများ	Full Match Download
Small file size and Good QualityFirst Half : http://www.mediafire.com/?gx11xlczl715b54 99.4 MBSecond Half : http://www.mediafire.com/?404d2fjdqw73prs 94.5 MB
http://www.mediafire.com/folder/o9w2ph6b2djot/arXno (6parts - Total 2.84 GB)credit to fbtz..................
Highlight DownloadAll Goalshttp://www.mediafire.com/?wbm9wxsynfny8a8 - 4.78 MB
credut to ShevaHD.. Upload by AMWilshere Goal - 18'http://www.mediafire.com/?a9bbfhehnsqs0wbOzil Goal - 58"http://www.mediafire.com/?yd5u5fkc96dyazx Add new comment
အမြောက်သံတွေ ဆူညံဖို့ အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ	Gu Ru	ဆောင်းပါး	နိုင်ငံတကာပွဲတွေရှိလို့ နားနေရတဲ့ ခဏတာဟာ အဲ့ဒီပွဲတွေကို စိတ်မ၀င်စားသူတွေ အတွက်တော့ တကယ့်ကို ရှည်ကြာလှတဲ့ ကာလတစ်ခုပါပဲ။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ နိုင်ငံတကာပွဲတွေ မနားခင်က ရပ်တည်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ မြဲနေစေဖို့ မကြာခင်မှာ တိုက်ပွဲဝင်ရတော့မှာပါ။
ဒီရာသီအတွက် အကောင်းဆုံးသော ခေါ်ယူမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ အိုဇေးလ်
ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုမှာ ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေပေမယ့် အခုလာမယ့် ပွဲစဉ်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တကယ် စမ်းသပ်မယ့် ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။
27 Sea Game ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ့လက်ရွေးစဉ် အသင်းအား အားပေးရန် အမာခံပရိသတ်များ ခေါ်ယူခြင်း	Ranger	သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများ	၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ့လက်ရွေးစဉ် အသင်းအား အားပေးရန် အမာခံပရိသတ်များ ခေါ်ယူခြင်း........ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ့လက်ရွေးစဉ် အသင်းအား အားပေးရန် အမာခံ ပရိသတ်များကို မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်မှ စတင် စုစည်းလျက် ရှိသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့တွင် ပါဝင်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘောလုံးဖန်ကလပ်များမှ အမာခံများအား ဖိတ်ခေါ်ထားပါသည်။ လီဗာပူးလ်၊ ချယ်လ်ဆီး၊ ရတနာပုံ၊ ရန်ကုန် အစရှိသည့် ဖန်ကလပ်များမှ ပရိသတ်များကို သုဝဏ္ဏကွင်းတွင် စုစည်းပြီး သီချင်းတိုက်ခြင်း၊ ပရိသတ်ပုံဖော်မှု လေ့ကျင့်ခြင်းများကို ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် အစီအစဉ်ဖြင့် စတင် ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လိုအပ်သော လူဦးရေ မပြည့်မီသေးသောကြောင့် ထပ်မံဖိတ်ကြားမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
........ မိမိတို့ Arsenal Myanmar Supporters Club အားလည်း ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ယနေ့ညနေ ငါးနာရီတွင် သုဝဏ္ဏကွင်းတွင် အစမ်း လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ အာဆင်နယ်ပရိသတ်များမှ စိတ်ပါဝင်စားသူများ အနေဖြင့် လာရောက် ပူးပေါင်းပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ချယ်လ်ဆီနှင့် လီဗာပူးလ် ဖန်ကလပ် အသီးသီးကလည်း လာရောက်ပူးပေါင်းကြသည်ဟု သိရသည်။ သို့ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စားသူများ အနေဖြင့် ယနေ့ညနေ သုဝဏ္ဏအားကစားပြိုင်ဝင်းသို့ လေးနာရီခွဲထက် နောက်မကျဘဲ အရောက်လာပေး စေလိုပါသည်။ လာရောက်ကြသူများကို ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ ဧည့်ခံကျွေးမွေးမည့်အပြင် အိမ်အပြန်လိုက်ပို့ပေးမည့် အစီအစဉ်ပါ ရှိပါသည်။........ြြုံ မြန်မာအသင်း အုပ်စုပွဲစဉ်များအားလုံးကို လိုက်ပါအားပေး ရမည် ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သော ၀တ်စုံ၊ အစားအစာ၊ နေရာထိုင်ခင်းများကိုပါ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ စီစဉ် ပေးထားမည် ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပသော ပွဲစဉ်များအတွက် သုဝဏ္ဏကွင်းတွင် အားပေးရမည် ဖြစ်သည်။ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပမည့် ပွဲစဉ်များ အတွက်လည်း အဖွဲ့ချုပ်မှ အစစအရာရာ တာဝန်ယူပေးမည် ဖြစ်သည်။ Add new comment
« Start Prev 1234567 8910 Next End »	Page9of 212	Next Match: